February | 2021 | bishnunmdc
जिन पाइन्टको रहर
विधाकेन्द्रित साहित्यिक पत्रिका वैजयन्तीको संस्मरण अङ्क –६, पूर्णाङ्क –७०, कात्तिक–मङ्सिर २०७७
धन्यवाद सहित साभार
संस्मरण–मिजौराम, भारत विशेष
यो प्रसङ्ग पूर्वोत्तर भारतमा पर्ने ऐजल मिजौरामको हो । जीवनको प्रारम्भिक, उर्वर, उत्साहपूर्ण, महत्वाकाङ्क्षी एवम् महŒवपूर्ण गोरेटोको रेखाङ्कन गर्ने सुनौलो समय मैले त्यहाँ बिताएँ । म त्यसमा अत्यन्त खुसी छु । मलाई सुख, दुःखमा अभिभावकत्व प्रदान गर्ने दाइ, दिदी र कलेजको प्रारम्भिक चरणको युवावस्थामा सँगसँगै वनभोजमा नाच्ने, देउसीभैलोमा रमाइलो गर्ने, खेल्ने दाँैतरीहरूलाई दुई बीसपछि सम्झँदा एकाएक भावुक पनि बन्न पुग्छु । बाल्यकालपछिको सबैभन्दा रमाइलो क्षण कलेजको नै हुँदोरहेछ चाहे त्यो सम्पन्नता वा विपन्नता जस्तोसुकै अवस्थाबाट गुज्रेको किन नहोस् ।
नेपालको गण्डकी प्रदेश जति क्षेत्रफल ओगटेको मिजौराम भारतको उत्तरपूर्वको पहाडी राज्य हो । त्यहाँ मिजौ र गोर्खाली जातिको बसोबास रहेको छ । मङ्गोल मूलका मिजौ जातिको रहनसहन, चालचलन, आनीबानी र अनुहार नाटिकुटी नेपालका गुरुङ, मगर, राई, लिम्बु, तामाङसँग मिल्दछ । मजस्तो चुच्चो नाक हुने आफ्नै देशका विहारीलाई उनीहरूले विदेशी भन्छन्÷भन्थे । मैले आई.ए. र बी.ए. नर्थ इष्टर्न हिल्स युनिभर्सिटीअन्तर्गतको पाछुङ्गा कलेजबाट (हाल पाछुङ्गा विश्वविद्यालय) ऐजलबाट पूरा गरेको हुँ । त्यसपछि नेपाल फर्केर थप उच्च शिक्षा आर्जनसँगै जीवन जिउने आँधीबेहरीमा होमिएको हुँ ।
मिजौरामको सदरमुकाम ऐजल (आइजोल) हो । सत्तरीको दशकमा त्यहाँका नेताले छुट्टै देश बनाउन सशस्त्र आन्दोलन गरेका थिए । नयाँ राज्यमा परिणत भएपछि ती माग त्यसैमा गाभिए । मिजौरामका धेरै सहर र गाउँ नेपाली नामबाट नामकरण गरिएका पाइन्छन् । त्यसमध्ये केहिका नाम पछि गएर मिजौ भाषामा रूपान्तरण भएका छन् भने कतिको अझसम्म नेपालीमा नै छन् । मिजौराममा नेपाली भाषी गोर्खाली कहिले पुगे भन्ने कुरातर्फ अध्ययन गर्ने हो भने हामी मानव सभ्यताको विकास सँगसँगै आसामतिर फर्कनुपर्ने हुन्छ ।
आधुनिक इतिहासको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा तेह्रौँ शताब्दीमा खस साम्राज्यको पतनपछि नेपालीहरूको बसाइँसराईमा तीव्रता आएको पाइन्छ । सिन्धु सभ्यताकाल र त्यसपछिको प्राचीन इतिहासमा अफगानिस्तान पाकिस्तान हुँदै एकथरी आर्यहरू पश्चिमोउत्तर नाकाबाट सतलज, गुगे, पूराङ हुँदै हिमालयका उपत्यका र भञ्ज्याङ हुँदै हिमालयका भित्री र बाहिरी काखमा पसेर बसोबास गर्न थालेका हुन् । त्यो यात्रा निरन्तर चलि नै रह्यो । अर्कोथरी आर्यहरू सिन्धु सभ्यताको पतनसँगै दक्षिणपूर्व, गङ्गा, ब्रह्मपुत्र हुँदै आसामदेखि बर्मासम्म पुगेको पाइन्छ ।
त्यसैमध्येका केहि जाति गङ्गाको उत्तर मैदान विहार, मिथिला, कपिलवस्तुमा ठूला बस्ती बसाएर बसे । जसका वंशज राजा जनक, गार्गी, याज्ञवल्क्य तथा कपिलवस्तुमा कपिल र बुद्ध जन्मे । नेपालमा उच्च हिमालय पर्वतमालाको उत्तर र दक्षिणका उपत्यकामा धेरै रैथाने जातिहरू ऋग्वैदिक कालभन्दा पहिले ८–९ हजार वर्षदेखि बसोबास गरेका थिए । तिनै मध्येका केही जातिहरू वर्तमान भारतको उत्तरपूर्वी राज्य मेघालय, नागालेण्ड, मिजौराम पुगेको हुनुपर्छ भन्ने केहि समाजशास्त्रीको तर्क रहेको छ । आसाममा अङ्ग्रेजको शासनभन्दा पहिलेदेखि नै नेपालीहरूले जङ्गल फडानी गरेर बस्ती बसाएको र खेतीपाती एवम् पशुपालन गर्न स्थानीयलाई सिकाएको प्रमाण त प्रशस्तै पाइन्छ । मिजौराममा बसोबास गर्ने नेपालीले कृषि र पशुपालन, भारतीय सेना एवम् प्रहरी सेवामा नोकरी, व्यापार, सरकारी नोकरी आदि गरेर बसेको पाइन्छ । आजकल जन्मसिद्ध अधिकारको लडाइँ लड्दै विभिन्न गौरवशाली काम गर्दै बस्नेको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ । प्रारम्भमा, सेनामा भर्ती भएपछि त्यतै घरजम गरेर बस्ने, उनीहरूसँगै गएका अन्य नागरिक पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय र खेतीपाती गर्दै बसोबास गरेको पाइन्छ । मिजौरामका धेरै ठाउँमा नेपालीहरूले नै व्यवस्थित कृषि र पशुपालन सुरु गरेका हुन् ।
मैले वि.सं. २०३२ को पुस–माघमा दश कक्षाको परीक्षा दिएँ । २०३३ सालको असारमा (सन् १९७६) नतिजा प्रकाशित भयो । विद्यालयले मबाट दोस्रो श्रेणीको अपेक्षा गरेको थियो । परीक्षामा एक जना मित्रलाई हिसाब सिकाइदिएको कारण मेरो उत्तरपुस्तिका खोसिएको थियो । उत्तरपुस्तिकामा मैले चालीस अङ्कको मात्र उत्तर दिन भ्याएको थिएँ । पुस्तिका खोसिएको हुनाले मैले उत्तीर्ण हुन्छु भन्ने आश छोडेको थिएँ तर पुस्तिकामा रातो नलगाइएको हुनाले म पास भएँ । पूरै उत्तर दिन पाएको भए सायद दोस्रो श्रेणीमा उत्तीर्ण भइन्थ्यो कि ? त्योबेला पास हुनु नै स्वर्ण पदक लिनुजस्तै थियो गाउँघरमा ।
घरको आर्थिक कारणले नेपालमा पढ्ने इच्छा पूरा भएन । त्यसबेला काका भारतको आसाम राइफल्स सैनिक सेवामा मिजौराममा हुनुहुन्थ्यो । मेरो पिताजीले म पनि सके सेना भए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा गर्नुभएको थियो । उहाँले सकेसम्म ब्रिटिस सेनामा र त्यसमा नभए भारतीय सेनामा भर्ती भइदेओस् र नुन, चिनी, चियापत्ति, मट्टितेलको जोहो गरिदेओस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो । बुबाको इच्छा भए पनि मलाई सानैदेखि विदेशमा सेना वा अन्य कुनै पनि प्रकारको लाहुरे बन्ने चाहना पटक्कै थिएन । म केवल पढ्न चाहन्थेँ ।
स्कुलपछि अध्ययनलाई निरन्तरता दिने भित्री अठोटका साथ वि.सं. २०३३ साउन महिनामा (सन् १९७६ जुलाइ) फस्ट आसाम राइफल्समा कार्यरत भार्का, स्याङ्जाका एक मगर थरका सिपाहीसँग साता दिनमा मिजौराम पुगेँ । त्यही महिनाबाट म १६ वर्ष पुगेको थिएँ । त्यसबेला ती लाहुरेका आफन्तलाई भेटने गरी ट्रकको यात्रा गर्दै टिस्टा नदीवरपरको साँघुरो बाटोबाट कहर काट्दै यात्रा गरिएको थियो । ती ठाउँहरू मध्ये टिस्टाको बाहेक मलाई अरू सम्झना छैन । त्यसपछि ब्रह्मपुत्र नदी पार गरेर सिलचर भन्ने सहर हुँदै मिजौरामको ऐजल पुगेको थिएँ । त्यसबेला मिजौराम ऐजल पुग्ने बाटो नेपालको पहाडी बाटो जस्तो कच्ची थियो । त्यो यात्रा मेरो जीवनकै लामो यात्रा थियो ।
‘छोरो भारतीय सेनामा भर्ती होस् । लाहुरे बनोस् । बिदामा नेपाल फर्कँदा एउटा रेडियो, चियापत्ति, चिनी, नुन, मट्टितेल, एकसरो कपडा र भैँसी किनबेच गर्दा लागेको ऋण पनि तिरोस्’ भन्ने बुबाको ठूलो चाहना थियो । त्यो स्वाभाविक पनि थियो । त्यसबेला भारतीय एवम् ब्रिटिस सेनामा भर्ती हुनु भनेको अहिलेको नेपालको निजामती सेवाको अधिकृत हुनुसरह थियो । त्यो उत्कट चाहनाले गर्दा उहाँले मलाई बकेर्नो भैँसीको कटौरामा नै दुहेको तातो दूध, मोही पार्दै गर्दा नौनी बन्नुभन्दा पहिलेको फिँज, नौनी घिउ, खारेको घिउ आदि प्रशस्त खुवाउनु हुन्थ्यो । म पनि हाम्रो गाउँनजिकै रहेको लौके भनिने गुरुङ गाउँका गुरुङका छोराहरू भन्दा कम लोर्के थिइनँ । गुरुङबुबा–आमा घर आउँदा “तेरो छोरालाई मेरो छोरासँग लाहुर पठाउनुपर्छ । लेखापढा भ’को ठिटाहरू त छिट्टै प्रमोशन हुन्छा” भन्नुहुन्थ्यो । त्यसले बुबामा झन् हौसला बढ्थ्यो ।
हङकङको लाहुरे होस् भन्नका लागि बा’ले कुल देवतालाई बोको, पूर्णगामको देउरालीमा हिउँदमा दुधधार, लुरीङ्कोट कालिकादेवी र रास्कोटमा रहेको खड्कादेवीमा बडादशँैको नवमीमा पञ्चैबाजासहित पञ्चवल (पञ्चबलि) लैजान भाकल गर्नुभएको थियो । कति पूजा गरिसकिएको थियो । केहि भाकल बाँकी थिए । नेपालको पहाडी क्षेत्रमा हुनेखानेको घरमा पनि सुका मोहर देख्ने भनेको त्यसबेला कोदो, मकै, धान, बाख्राका पाठापाठी र भैँसी बिक्रीबाट नै थियो । धेरै भैँसी पाल्नेले घरमा दुधघिउ नखाएर बचाएर नुन किन्न घिउ सँगेल्थे र बेच्थे । त्यसबाहेक रेडियो, भाँडाकुँडा, साबुन, सफा र नयाँ लुगा, कम्बल हुने भनेको लाहुरेको घर नै हुन्थ्यो । अहिले कसैको नाति वा छोरो अरबका खाडीमा पुगेको छैन भने उसको घरमा चाउचाउको झोल उम्लँदैन । कसैको घरमा ठूलो हवाइजहाज चढेर लाहुर पुगेर कमाएको लाहुरे रहेछ भने उसको घरमा अहिले फोन, टिभी हुन्छ नै । चाउचाउको झोल खाँदै छोराबुहारीले फोन र फेसबुकमा कुरा गरेको सुनेर मख्ख छन् अहिलेका बा र आमाहरू, वृद्ध हजुरबा र हजुरआमाहरू । तर, खेतबारी भने बाँझै छन् ।
त्यसबेलाको पहाडको हाम्रो परिवार वर्षभर खान र वर्षमा दुई सरो कपडा फेर्न सक्ने अबस्थाको थियो । सामान्य किसान परिवार । दुध, घिउ, आटो, पिठो खानको पटक्कै दुःख थिएन ।
दशैँमा धानको एउटा भकारी खोलिन्थ्यो । मेरो हजुरबाले वरपरका इष्टमित्र, डोको, नाम्लो, भकारी बुन्ने, नारा, हलोजुवा बनाउने, लुगाफाटो सिउने, आँशी कोदालो अर्चाप्ने, खेतबारीमा काम गर्ने विशेष परिवारको सदस्यको निधार खाली नरहोस् भनेर दशैँमा एक–दुई पाथी गर्दै पाँच मुरी धान बाँड्नुहुन्थ्यो । त्यसपछि घरलाई राख्नुहुन्थ्यो । चामल भए पनि सबै सदस्यका लागि घरमा दिनहुँ भात पाक्दैनथ्यो । नयाँ धान मङ्सिरमा मात्र पाक्ने भएकाले चाडबाडको लागि त्यो व्यवस्था गरिएको हुन्थ्यो । अनदिको धानको चामलको लागि छुट्टै ढाव खेत थियो । अनदिको चामल र गोरस घरमा टुट्दैनथ्यो । शिक्षाको महŒवभन्दा त्यसबेला खेतीपाती र पशुपालनको बढी आवश्यकता थियो । स्कुल भर्खर खुल्न थालेका थिए । गुरुकुल, बनारसबाट फर्केका र घरमा नै बसेर वेद अध्ययन गर्ने कम थिए । अहिले पेटमा गर्भ रहनासाथ आफ्ना छोराछोरीलाई शिक्षा दिन भनेर वृद्ध आमाबालाई पिँडीमा एक्लै छोडेर सहर छिर्ने जस्तो चलन त्यसबेला थिएन ।
मेरो पोखरा गएर आई.ए. पढ्ने चाहना पूरा हुन मिठो चामल फल्ने खेत बेच्नुपथ्र्यो । एस.एल.सी. भनेको नै त्यसबेला गाउँमा उच्च शिक्षा थियो । ‘पढेर के काम, हलो जोती माम’ भन्ने भनाइले जितेको समय थियो त्यो । आखिर यथार्थ त त्यही नै हो । मेरा धेरै सहपाठी पढ्न छोडेर आमा र बालाई घाँसदाउरा गर्न सघाउन थालिसकेका थिए । मेरो लागि खेत बेच्ने कुरा भएन । त्यसैले पोखरा गएर विज्ञान विषय पढ्ने मेरो चाहना कालीगण्डकीमा उर्लेको साउने भेलमा मिसिएर देवघाट, गण्डक, गङ्गा हुँदै ब्रहमपुत्रमा मिसियो । म त्यही ब्रह्मपुत्र नदी तरेर, आसाम नाघेर बर्माको सीमामा रहेको मिजौराम पुगेँ । त्यो समय हो जुन बलवान् हुन्छ ।
त्यहाँ पुग्नासाथ मैले काकालाई पढ्ने चाहना भएको कुरा बताएँ । अरू मामाहरू (सिपाहीका परिवारका छोराछोरीले अन्य सिपाहीलाई मामा भन्ने चलन)ले पनि मेरो पढ्ने चाहनालाई सही ठानेका थिए । उनीहरूले नपढेको कारणले नोकरीको अवधिभर सिपाही मात्र भएर रहनुपरेको, नपढेको हुनाले उच्च तहमा नेपालीहरू नभएको र भारतीय हाकिमले तथानाम गाली गर्ने गरेको कुरा बुझेका मात्र होइनन् भोगेका पनि थिए । मेरो काकाले पनि पढाइको महŒव राम्रोसँग बुझ्नुभएको थियो । त्यसैले मैले कलेज पढ्ने कुरा गर्दा सबैले मलाई पढ्न नै प्रेरित गर्थे ।
म केहि महिना ब्यारेकमा लुकेर बसेँ । उनीहरूकै खाना मस्तसँग खाएँ । मिजौराम पहाडी क्षेत्र भएकाले नेपालको पहाडजस्तै लाग्थ्यो । ब्यारेक वरपरका थुम्कामा परिवारसहितका सिपाही बस्ने ससाना घर (क्वाटर) थिए । ठूलो पद भएका हाकिमका क्वाटर ठूला नै हुन्थे । उनीहरूको तामझाम सिपाहीको परिवारभन्दा फरक हुन्थ्यो । तिनका छोराछोरी स्कुलका कपडा लगाएर स्कुल जान्थे । कलेज पढ्नेहरू पनि थिए । ब्यारेकमा धेरै दिन बस्न नमिल्ने भएकोले परिवारसहितका सिपाहीहरूको क्वाटरमा केहि समय बसेँ ।
मैले अहिले सम्झेअनुसार क्वाटरमा एक पटक प्युठानका क्षेत्री परिवारसँग बसेँ । उनको एक सानो छोरो थियो । छ्यामा पनि असाध्यै जाती थिइन् । बाहिरपट्टि खाना पकाउने भान्साकोठा थियो । भित्र बैठक अनि सँगै बिछ्यौना थियो । म बैठककोठामा एउटा खाट राखेर त्यसैमा बस्न थाले । त्यसरी बस्न थालेपछि सेनाका अन्य परिवार र तिनका छोराछोरीसँग परिचय हुन थाल्यो । ब्यारेकबाट एक किलोमिटरको दूरीमा खटला बजार रहेको छ । त्यो पुरानो गोर्खा बस्ती हो । क्वाटरमा बस्दाबस्दै खटला बजार क्षेत्र वरपरका गोर्खाली (भारतमा नेपाली भाषीलाई गोर्खाली भनिन्छ) परिवारसँग बस्ने सैनिकका छोराछोरी र अन्य स्थानीय गोर्खाहरूसँग परिचय बढ्न थाल्यो । तिनीहरूको सम्पर्क सूत्रको डोरी ऐजलवरपर सयौँ वर्षदेखि बसोबास गरेका नेपाली भाषी गोर्खाली साथीभाइसम्म पुगेर मित्रतामा परिणत भयो । छोटो समयमा नै म त्यहाँका नेपालीबीच झ्याम्मिएँ । मैले नेपालबाट हाईस्कुल सकेर त्यहाँ पुगेको थाहा पाएपछि साथीहरूले पनि मलाई कलेज पढ्न थप हौसला दिन्थे । दिन बित्दै जाँदा म भित्रको पढ्ने इच्छाको कोपिला क्रमशः फक्रँदै गयो ।
करिब डेढ वर्ष काम खोज्ने, सम्पर्क विस्तार गर्ने काममै बित्यो । कुनै काममा लगाउन र पढाउन मेरो काकाले भरसक धेरै कोसिस गर्नुभयो । अङ्ग्रेजीमा टाइप गर्ने तालिम गरेपछि केहि पाइन्छ कि भनेर त्यो पनि गरेँ । उहाँ सवारी चालक भएकाले अधिकृतसँग परिचय थियो । त्यसैले सबैलाई मेरोबारे कतै कुनै पदमा भर्ती गर्न सकिन्छ कि भन्दै हारगुहार गर्नुभयो । एक पटक काका र बुबाको चाहना पूरा गर्न काकाको संयोजनमा क्लर्क पदमा भर्ती हुनको लागि ऐजलबाट मेघालय–सिलोङसम्म जानुपर्ने भयो । सायद त्यसबेला सेनाकै ट्रकमा बसेर दुई दिन लगाएर त्यहाँ पुगेको हुनुपर्छ । त्यसबेला त्यहाँको बाटो हाल हाम्रो भर्खरै खुलेका पहाडी बाटोजस्तै साँघुरो थियो । त्यसबेला अन्तरवार्तामा मलाई प्रश्न सोध्ने अधिकृतले हिन्दीमा भनेका थिए– ‘तिमी सानो छौ, ब्यारेकमा टन्न दाल खाएर आऊ । मैले क्लर्क पदमा भर्ना गर्नेछु ।’ दाल भात त खाइयो तर फेरि भर्ती हुने प्रयास गरिएन ।
त्यसबेलासम्म ब्यारेकका सिपाही, उनका परिवार र खटला बजारका गोर्खालीसँग मेरो चिनापर्ची भइसकेको थियो । त्यहाँ बसोबास गरेका गोर्खालीलाई जनजातिमा राखिएको हुनाले कलेजमा मासिक शुल्न तिर्नुपर्दैनथ्यो । साथीभाइले त्यसरी नै त्यहाँ निःशुल्क भर्ना गर्ने र मासिक शुल्क पनि मिनाह गराउन प्रयास गर्ने गरी भर्ना हुने सल्लाह भयो । काकाले पनि अनुमति दिनुभयो । वि.सं. २०३५ (सन् १९७८)मा पाछुङ्गा कलेजमा दुई वर्षे पि.यु.सी (एचभ ग्लष्खभचकष्तथ ऋयगचकभ) मा भर्ना भएँ । मार्कसिट लगेकै थिएँ । नेपालबाट चारित्रिक प्रमाणपत्र मगाएर पछि पेस गरेँ । स्थानीय गोर्खा विद्यार्थी साथीहरूको सहयोगले भर्ना हुन सकेको थिएँ ।
नेपालबाट मुग्लान पस्नेहरू सकेसम्म सेनामा भर्ती हुन्थे । त्यसपछिका पुलिसमा छिर्थे, शारीरिक मेहनत गर्नेले गाई पालेर दुध बेचेर पैसा कमाउँथे । त्यसबाहेकका नेपालीले कि त होटलमा भाँडा माझ्थे कि पाले बस्थे वा निजी घरमा नोकर बनेर कान्छा वा बहादुर भनिन्थे । पढ्न थालेपछि स्थानीय गोर्खाली परिवार धेरै खुसी भए । सबैका मनमा नेपालबाट मुग्लान छिरेको एक नेपालीले उनीहरूको वरपर बसेर उच्च शिक्षा अध्ययन गरोस् भन्ने नै थियो । सबै खुसी थिए । त्यसबेला म प्युठानको सिपाहीको परिवारसँग बस्दथे । खानाको मासिक हिसाब गरेर काकाले तिर्नुहुन्थ्यो ।
म नेपालको गाउँको स्कुलमा पढेको हुनाले अङ्ग्रेजी राम्रो हुने कुरा भएन । त्यहाँ सबैले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढ्ने भएकाले सबैको अङ्ग्रेजी राम्रो थियो । कलेजमा पनि अङ्ग्रेजी माध्यममा नै पढाइ हुने भएकाले मलाई अचाक्ली कठिन भयो । कक्षामा सानो, नौलो र लामो नाक हुने विद्यार्थी सायद म एक जना मात्र थिएँ । हलमा १०० भन्दा बढी विद्यार्थी हुन्थे । एक पटकको घटना म सम्झन्छु । एक दिन अङ्ग्रेजी पढाउने शिक्षकले मलाई मेरो नामको स्पेलिङ भन्न भन्नुभयो । मैले ‘बी आई …’भनेँ । तर सबै गलल गलल हाँसे । सबै हाँसे पछि मलाई फेरि दोहो¥याउन लगाइयो । फेरि सबै हाँसे । यो सिलसिला तीन पटक दोहोरियो । म रातोपिरो भएँ । आँसु पनि झारेँ ।
किन त्यसो गरिएको थियो थाहा पाइनँ । बाहिर निस्केपछि गोर्खाली साथीहरूलाई सोधेँ । मैले मेरो नामको अङ्ग्रेजी अक्षर उच्चारण गर्दा फरक लवजमा पाखे तरिकाले गरेको हुनाले सबैलाई अनौठो लागेर सबै गलल हाँसेका रहेछन् । होच्याउन होइन कि रमाइलो गर्न साथीहरूले त्यही कुरा पछि हामी सामाजिक कार्यमा भेला भएको ठाउँमा ठट्टामा भन्न थाले । त्यसबेला हामी थाहा भएसम्म मलाम र मृत्यु भएको घरमा कुरुवा बस्न एक–दुई घण्टा हिँडेर पनि जान्थ्यौँ । त्यो असाध्यै राम्रो परम्परा थियो । त्यसबाहेक नेपालमा मनाइने चाडपर्व, साहित्यिक कार्यक्रमका साथै देउसीभैलो विशेष रूपमा मनाइन्थ्यो । हजारौँ वर्ष पहिलेदेखि विदेशमा बसेका गोर्खालीले नेपाली संस्कृति र संस्कार नेपालकै लागि अनुकरणीय हुने गरी जोगाएकोमा म चकित हुन्थेँ । मैले त्यहीँबाट धेरै कुरा सिकेँ ।
कलेजमा भर्ना भएर पढ्न जाँदा मलाई पढ्न र बुझ्न निकै कठिन भयो तर मैले हार खाइनँ । ऐजलमा गएपछि पढाइको महŒव झन् बुझेँ । मलाई भारतीय र नेपाली सिपाहीदेखि अधिकृत र ऐजलका स्थानीय गोर्खाली अभिभावक, साथीभाइ र पढ्दापढ्दै पढ्न छोडेका साथीले पनि पढ्नकै लागि प्रेरित गर्थे । पढिएन भने जीवनभर भाँडा माझ्ने र चौकीदार हुनेबाहेक अरू काम केहि पाइँदैन भन्ने कुरा झनै गहिरोसँग छि¥यो । त्यसले पनि बाल्यकालको पढ्ने मेरो चाहनालाई निक्कै बल दियो । आकाश जत्रै विशाल छाती भएका गोखार्ली थिए त्यहाँ जसले नेपालबाट गएको एक जना केटाले उच्च शिक्षा हासिल गरोस् र उसको जीवन सुखी होस् भन्ने चाहन्थे । म सम्झन्छु हाकिम, पान पसले, थोक विक्रेता, पशुपालक किसानदेखि चौकीदारसम्मले मलाई हौसला दिन्थे । त्यस्तो कुरा नेपालमा पहिले हुन्थ्यो तर आजकल आधुनिकताले गर्दा सबै लोप भइसकेको छ ।
त्यो प्रेरणाले गर्दा धेरै मेहनत गरेँ । केहि नबुझे पनि कोसिस गरेँ । वि.सं. २०३६ असोज (सेप्टेम्बर १९७९) मा भएको पि.यु (आई.ए.) को पहिलो अन्तिम परीक्षामा भूगोल र अङ्ग्रेजी विषयमा फेल भएँ । गोर्खाली अन्य साथीहरू पनि अनुत्तीर्ण भएका थिए । पीर त प¥यो । दोस्रो पटक २०३७ भदौ (सेप्टेम्बर १९८०)मा दिएको परीक्षामा भूगोलमा पास भएँ तर अङ्ग्रेजीमा फेरि फेल नै भएँ । सङ्कट प¥यो । पास गर्न नै सक्दिनँ कि भन्ने लाग्यो । त्यसबेला आइजोल मुख्य सहरमा हृ्राङ्वाना कलेज त्यही वर्ष खुलेको थियो । त्यो कलेजले आई.ए. मा एक विषयमा मात्र फेल भएकालाई बी.ए.मा भर्ना गर्छ भन्ने जानकारी एक जना मेरो जस्तै विषय लागेको मिजौ साथीले दिए । म त्यहाँ भर्ना भएँ । त्यसबेला म कमला दिदीसँग बस्थेँ ।
त्यो समयमा मसँगै पढ्ने धेरैले पढाइ छोडिसकेका थिए । पास गरेर बी.ए. पढ्ने कम थिए । दुई–तीन जना भने म भन्दा एक वर्ष अगाडिका थिए । हृ्राङ्वाना कलेजले गर्दा मेरो एक वर्ष बाँचेको थियो । अचम्मको कुरा के भने बी.ए. पहिलो वर्षमा पढ्दै गर्दा आई.ए.को बाँकी रहेको विषयमा भदौ २०३८ (सेप्टेम्बर १९८१) मा पास गरेँ र सोही वर्ष नै बी.ए. पहिलो वर्षको परीक्षामा पनि सबै विषय पास गरे । यद्यपि बी.ए. को अन्तिम परीक्षामा पहिलो र दोस्रो वर्ष दुवैको तयारी गर्नु पर्दथ्यो । त्यसैगरी भदौ २०३९ मा (सेप्टेम्बर १९८२) बी.ए. एकै पटकमा साधारण श्रेणीमा पास भएँ ।
पि.यु.मा फेल भए पछि मेरा सङ्कटका दिन सुरु भए । मिजौराम छिरेको तीन वर्ष हुन थालेको थियो । म तिनै प्युठानका सिपाहीको परिवारसँग बस्दै आएको थिएँ । उनी सवारी चालक नै थिएँ । उनले मलाई अति माया गर्थे । एक दिन रक्सीले मातेको बेला श्रीमतीसँग झगडा गरे । कारण आर्थिक थियो र म बोझ बनेको थिएँ । त्यो रात सुत्न सकिनँ । उनीहरूलाई काकाले खर्च दिने भन्नुभएको थियो । त्यसमाथि मैले खर्पनमा कुवाबाट पानी बोकेर ल्याउँथे । छुट्टीको दिन साथीहरूसँग मिलेर दाउरा खोज्न पनि जान्थे । त्यसको सँगसँगै साथीहरूसँग खेल्न, रमाइलो गर्न, मलाम जान कहिँ बिराउँदिनथँे । मलाई यहाँ बस्नु ठीक लागेन । मैले पास गर्न पनि सकिनँ । अब नेपाल पनि नजाने र मिजौराममा पनि नबस्ने जस्ता तर्कना रातभर खेले । भोलिपल्ट ती सिपाही मामाले मेरो हातमा एक सय भारतीय रुपियाँ थमाउँदै भने ‘अन्तै बसेर पढ्, तिमीले धेरै चिनेका पनि छौ तर यहाँ राख्न सक्दिनँ ।’
अब खाने, बस्ने, पढ्ने खर्चको जोहो आफ्नै थाप्लोमा आयो । समयको अन्तरालमा मैले आफैँले जीवनको लगाम समातेर डोरिनुपर्ने भयो । मनभित्रको कमजोर भावनालाई पढ्नुपर्छ र नेपाल फर्कनुपर्छ भन्ने दृढ अठोटले जित्यो । यही अठोटले मलाई बाटो खोज्न निर्देश गरिरहेको थियो । बिरानो ठाउँमा आमाबाबुको काखमा मात्तिने उमेरको म अल्लारे युवालाई त्यो सजिलो भने पटक्कै थिएन । कैयौँ पटक मुटुमा भक्कानो बसे तापनि त्यो सङ्कटबाट पार पाउनु नै पर्दथ्यो तर ठोस रूपमा उपाय भने केहि थिएन । मानिसलाई अर्ती र उपदेश दिन जति सजिलो हुन्छ त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न उत्तिकै कठिन हुन्छ । कलेजको पढाइ नसक्दै नेपाल फर्कने हो भने मेरो हैसियत एस.एल.सी. मात्र नै हुन्थ्यो । मेरो चार वर्ष त त्यत्तिकै खेर जाने भयो । अतः मैले पढाइ पूरा गर्नैपथ्र्यो । मैले आर्थिक सहयोग कसैसँग मागिनँ । जस्तोसुकै भए पनि पढ्ने समय मिल्नेगरी काम खोज्न सबै स्थानीय गोर्खाली दाइ, दिदी र साथीभाइ सबैलाई भनेँ । सानो काम गरेर मानिस सानो हुन्छ भन्नेमा म आज पनि छैन । लक्ष्य भने निर्दिष्ट हुनुपर्छ ।
त्यसबेला खट्ला बजारवरपर बस्ने धेरै नेपालीसँग मेरो परिचय भइसकेको थियो । खट्ला बजारको पुरानो नेपालीले राखेको नाम खट्टा बजार हो । त्यहाँ धेरै पहिले झाडी फाडेर गोर्खालीहरू बस्न थालेका थिए । वरपर कागती, निबुवा र अन्य कुराहरू बेच्ने गर्दथे । त्यहाँ अमिलोलाई खट्टा भनिन्छ । खट्टाबाट पछि खट्ला बजार भएको स्थानीय बासिन्दाले सुनाएका थिए । पछि त्यो मुख्य बजार क्षेत्र बन्न गयो । मुख्य बजार र वरपर सबै गोर्खालीका मात्र घर रहेका छन् । खटलामा गोर्खालीका ठूला गोदामदेखि पानपसलसम्म, रेस्टुराँदेखि साना भट्टी पसलसम्म, हाकिमदेखि पियनसम्म त्यहीँ थिए । पछिपछि त मिजौले डाहसमेत गर्ने अवस्था आएको थियो किनभने मुख्य बजारका सबै घर गोर्खालीका थिए ।
स्थानीय दाइहरू निर्मल पुन, नारायण थापा, कन्यै दाइ तथा अन्य साथीहरूको समन्वय र सहयोगमा म खट्ला बजारमा दिदी कमला गुरुङको घरमा बस्ने भएँ । त्यो घर कमला दिदीको पनि दिदीको थियो । त्यहाँ उहाँले सानो रेस्टुराँ व्यवसाय गर्नुहुन्थ्यो । मानिसलाई सहयोग गर्ने भनेको सङ्कटको बेला हो । म जे–जस्तो काम गर्न पनि तत्पर थिएँ तर मलाई कलेज जाने समय भने चाहिन्थ्यो । त्यसबाहेक मलाई अरू केहि चाहिएको थिएन । त्यसबेला मलाई त्यो जस्तो ठूलो घर र कमला दिदीजस्ती ठूलो आभिभावक कोही थिएन । कमला दिदीको गुन मैले हृदयमा सजाएर राखेको छु जसले गर्दा मैले जीवनलाई एउटा गोरेटोमा लतार्न सफल भएँ ।
नेपाली रेस्टुराँ आज अमेरिका र युरोपका धेरै देशमा चर्चित छन् । नेपालीको परिकार मिठो हुन्छ । नेपालीको आँखामा माया र अनुहारमा मिठो मुस्कान हुन्छ । मिजौराममा पनि नेपालीले सञ्चालन गरेका साना रेस्टुराँ, चिया पसल, भट्टीमा असनमा नेवारी खाजाको लागि भीड भएझैँ भीड हुन्थ्यो । म बस्ने भनेको गोर्खाली रेस्टुराँ पनि खटला बजारमा नै थियो । त्यो रेस्टुराँमा आलु, पुरी, तरकारी, मासुको परिकार बन्थ्यो । खुला नभए पनि चियापानसँगै बेलुका तीन घण्टा रक्सीको पनि लुकिछिपी व्यापार हुन्थ्यो ।
बिहान टिनको अँगेनोमा कोइला बालेर आगो बाल्ने काम हुन्थ्यो । अन्य काम दिदी कमलाले गर्नुहुन्थ्यो । मैले सामान्य सहयोग गर्थे र खाना खाएर कलेज जान्थे । बेलुका खाजा खाने मानिसको भीड हुन्थ्यो । त्यहाँ आउने धेरै नेपाली र केहि मात्र मिजौ हुन्थे । दिदीले खाजा बनाउने गर्नुहुन्थ्यो मैले खाइसकेका गिलास र प्लेट माझ्थेँ । तीन घण्टा व्यस्त भएपछि काम सकिन्थ्यो । दिदीले मासु, आलु र तरकारी अति मिठो पकाउनुहुन्थ्यो । काम सकिएपछि मज्जाले खान्थ्यौँ र सुत्थ्यौँ ।
त्यही आम्दानीबाट रामसिंह, विक्रम र दिदीसहित तीन जनाको परिवार चलेको थियो भने म थपिएपछि चार जना भएका थियौँ । म त्यहाँको परिवारको सदस्यमध्येको एक भएँ । काम गरेर अध्ययन गरेँ । म कलेजमा पढ्दैछु भन्दा त्यहाँ आउने ग्राहक र साथीभाइ सबैले मेरो प्रशंसा गर्दथे । मेरो हौसला चुलिन्थ्यो । म नेपालमा छु कि भारतको मिजौराममा भन्ने पनि मैले बिर्सन थालेको थिएँ । मैले पढ्दै गरेको भएर सबैले औधी माया मात्र होइन आदर पनि गर्थे । त्यहाँका धनी गोर्खालीका छोराछोरी जसले धेरै पढेका थिएनन् उनीहरूका आमाबाबुको लागि म प्रेरक बनेको थिएँ । रेस्टुराँका एक जना भद्र मिजौ ग्राहक (नाम बिर्सेँ) ले मलाई आई.ए.को अङ्ग्रेजी विषयको व्याकरणका सूत्र र उत्तर दिने तरिका सिकाइदिएका थिए । जसले गर्दा मैले पास गरेको थिएँ ।
म ऐजलमा बस्दा भारतका विभिन्न ठाउँमा बसेका नेपाली भाषी भारतीयले स्थानीय जातिबाट पाएको दुःख, तिनीहरूको सम्पत्ति लुटिएको, काटिएको सुन्दा र देख्दा म साह्रै विचलित हुन्थेँ । मलाई पीडाबोध हुन्थ्यो । मैले साथीहरूलाई त्यसबेला भन्ने पनि गर्थे ‘हामी सबै नेपाल जाऔँ र नेपालमा नै बसौँ । नेपालको मुख्य व्यापार सबै विदेशी व्यापारीको हातमा रहेको छ । तिनीहरूलाई त्यहाँबाट लखेटौँ । हामी नेपाल गएर काम गरौँ । उतै बसौँ । त्यसपछि कसले भन्छ हामीलाई विदेशी ।’ मैले त्यसो भने तापनि त्यो त्यति सजिलो थिएन किनभने उनीहरूका धेरै पुर्खा मिजौराम वा भारतको विभिन्न ठाउँको माटोमा जन्मेर त्यसैलाई आफ्नो मातृभूमि बनाएका थिए । तापनि बारम्बार हुने जातीय आन्दोलनमा नेपाली भाषी भारतीयले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ आजसम्म ।
त्यस्तो कुरा गर्ने नेपालबाट गएको म र त्यहीँका स्थानीय गोर्खा युवक थियौँ । त्यो कुरा हाम्रा सर्वमान्य निर्मल पुन र कन्यै दाइलाई पनि भन्यौँ । उहाँहरूले ‘यो राजनीतिक कुरा हो । तिमीहरूले गर्ने कुरा होइन र तिमीहरूले यस्तो कुरा बुझ्दैनौ ।’ भन्नुभयो । दाइहरूले त्यसो भने पछि त्यो कुरा त्यत्तिकै सेलायो । मैले उठाएको त्यो कुरा आज पनि घरिघरि सान्दर्भिकजस्तो लाग्छ जब गोर्खालीहरूलाई हजारौँ वर्षदेखि त्यही भूमिमा बसे पनि विदेशी भनेर लखेटिन्छ, काटिन्छ, लुटिन्छ र मारिन्छ । आज पनि मैले मेरो यौवनावस्थामा सोचेको त्यो कुरा एक कोणबाट हेर्दा ठीकै हो कि जस्तो लाग्छ संसार साँघुरो भए तापनि ।
हो निर्मल दाइले भनेझैँ त्यो राजनीतिक विषय हो । नेपाली भाषी गोर्खाली वा संसारका अन्य मुलुकमा भएका नेपाली भाषीलाई अन्याय हुँदा नेपालले बोल्न सक्नुपर्ने हो । नेपाली भाषी भुटानीलाई भारतमार्फत नेपाल छिराइयो । पछि फर्केर भुटान जान्छौँ भन्दा मेचीपारि जान दिएन । उनीहरूलाई अन्तमा लाखापाखा पारियो । ठूलाले जे गरे पनि हुने सभ्यताभित्रको असभ्य चरित्रले मन दुख्छ । म नेपाल फर्केपछि त्यहाँका नेपाली पनि लुटिए, मारिए, केहि गोर्खाली नेपाल छिरेर यतै पनि बसे । गोर्खाली वीर र स्वाभिमानी भएकै करण अन्यायको विरुद्ध लड्दै, नैसर्गिक अधिकार थप्दै बसिरहेका छन् । सङ्घर्ष निरन्तर जारी छ । मेरो ऐक्यबद्धता म मिजौराममा हुँदाजत्तिकै छ ।
एक पटक कोलासिवबाट प्रेम दाइसँगै फर्कदै थियौँ । मिजौ नेशनल फ्रन्टका बन्दुकसहितका मित्रहरू बन्दुक बोकेर बसभित्र छिरे । उनीहरूले विदेशी को छ यहाँ भनेर सोधे । मलाई पनि सोधे । प्रेम दाइको मिजौ भाषा मिजौको भन्दा मिठो छ÷थियो । उहाँले हामी गोर्खाली हौँ, खट्लामा बस्छौँ भनेपछि छोडे । खटलामा नै बसेको बेला दिदी मिनु लक्ष्मी, निर्मल पुनको सक्रियतामा ‘निगालो’ नामक मासिक साहित्यिक पत्रिका स्टेन्सिलमा हातले लेखेर लिथो मेसिनबाट छपाइ पनि गरिएको थियो । नेपाली लेख्ने दाइ बाला मिजौ हुनुहुन्थ्यो वहाँको नेपाली बोल्ने शैली हाम्रो भन्दा मिठो थियो र हस्ताक्षर उस्तै राम्रा । त्यसबेलाको क्षमताको आधारमा पत्रिकामा सक्रिय रहेँ । गोर्खाली जाति, भाषा, भेषभूषा र संस्कृतिको संरक्षणमा त्यहाँका नेपालीभाषी गोर्खाली अहिलेसम्म उत्तिकै क्रियाशील छन् ।
पहाडमा जन्मेँ, त्यहीँ हुर्के, एसएलसी गाउँबाट नै गरेँ तर नपत्याउँदो कुरा के भने मैले घरमा घाँस काट्ने, कोदालो खन्ने काम गरिनँ । बुबाले मलाई घाँस काट्ने, गोबर सोहर्ने, भैँसी दुहुने, मोही पार्ने र खेतबारीको काममा लगाउनुभएन । त्यस प्रकारको दुःख नगरेको हुनाले मलाई खट्ला बजारमा त्यसरी रेस्टुराँमा बसेर काम गर्दा मन खिन्न भएर आँखाभरि आँसु छचल्किन्थे । एक्लै भएको बेला रुन्थे पनि । दुःख लाग्थ्यो तर मैले आफनो पढाइ सम्झँदा त्यस्ता कुरा बिर्सेर आफैँ मुस्कुराउँथे । जे होस् पढ्ने लक्ष्यबाट विचलित भइनँ । पढेर जागिर नपाइए बरु सानो काम गर्न पनि हुन्छ तर पढ्नुपर्छ भन्ने मेरो दृढ अठोट नै थियो । शारीरिक परिश्रमका जस्तोसुकै काम गरे तापनि उच्च शिक्षा हासिल गर्नुपर्छ, त्यसले खिन्नता हटाउँछ भन्नेमा विश्वास गर्छु ।
म बीचबीचमा नेपाल आएर फर्कन्थेँ । दुःख परेको बेला जस्तो काम पनि गर्थेँ तर पहिरनमा अलि ब्रान्डेड लगाउने चाहना गर्ने सानैदेखिको नराम्रो सोख थियो । जिन र कट्राइको पाइन्ट, रेडीमेड सर्ट, टिसर्ट, स्पोटर्स जुत्ता, बेलिबटम पाइन्ट पहिरने भुत्ते सोखचाहिँ अलि बढी नै थियो । लामो कपाल पाल्ने र हिमाल हेर्न रमाउने बाल्यसोख त्यहाँ झन् हुक्र्यो ।
विदेशी सामानका लागि नेपाल पहिलेदेखि नै कहलिएको हो । नेपाल आउने भारतीय पर्यटकले पनि जिनका पाइन्टसहित कपडा लैजान्थे र अहिले पनि लैजान्छन् । हङकङ र सिङ्गापुरबाट सिधै सामान काठमाडौँ आउँथे । त्यहाँबाट लुकीचोरी इलाम हँुदै दार्जिलिङ र त्यहाँबाट मिजौरामसम्म ओरिजिनल ब्राण्डका पाइन्ट, जापानी सारी र जुत्ताहरू पुग्थे । म आफैँ त्यस्ता कपडामा सौखिन भएकाले पनि फर्कँदा आपूmलाई एक–दुई जोर विदेशी जिन र कट्राइका पाइन्ट, ज्याकेट, टिसर्टहरू लिएर फर्कन्थँे । फेरि नेपालबाट भारततिर एक जोरबाहेक कपडा लैजान पाइन्नथ्यो । बीचबीचमा पुलिसले धेरै दुःख दिन्थे । म मिजौराम फर्केपछि कपडाहरूको लागि नेपाली साथीहरू बीच लुछाचुड हुन्थ्यो र धेरैजसो मैले लगाउन पाउन्नथेँ ।
मलाई जिनको पाइन्ट नभई नहुने । एक पटक मसँग एउटै पनि भएन । दार्जलिङबाट ल्याएका जिन पाइन्ट एक–दुई ठाउँमा किन्न पाइन्थ्यो । त्यसबेला बजारमा जिन पाइन्ट आएको साथीहरूबाट थाहा पाएँ तर मसँग पैसा थिएन । जिन पाइन्ट किन्न पैसा सापटी माग्ने औकात त थिएन नै त्यसमाथि माग्ने खालको पनि म थिइनँ । त्यसबेला कलेज बन्द थियो । त्यसैले मैले जिन पाइन्ट किन्नका लागि साथीभाइ कसैलाई थाहै नदिई मोटरबाटो खन्न ज्यामी काम गर्ने निर्णय गरेँ । त्यो खटलाबाट नजिकै थियो । गोर्खाली दाइ र साथीहरूले देख्लान् भन्ने पनि पीर थियो । एकपटक त्यस्तै साह्रै आपत परेकाले जुत्ता सिउने निर्णय गरेर जुता सिउन बसेको मात्र के थिए मनु सुब्बालाई देखेपछि लाजले भागेको थिएँ । त्यसबारे मेरो संस्मरण रचना साहित्यिक पत्रिकामा प्रकाशित पनि भएको छ ।
बाटो खन्ने ज्यामीको दैनिक ज्याला कति थियो मैले बिर्सेँ । मैले बाटो खन्न सक्छु कि सक्दिनँ, गैटी र झेङ्पाल उचालेर बाटो खन्न कत्तिको गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा मैले अनुमान नै गरेको थिइनँ । बाटो खन्ने र त्यसबाट आएको पैसाले जिनको पाइन्ट किन्ने भन्ने टुङ्गोमा म पुगेँ । बाटो खन्न गएँ । मैले मभन्दा अग्लो झेङ्पाल दुई घण्टाजत्ति के उचाल्दै पछार्दै गरेको थिए मेरा दुवै हातका हत्केलामा फरर फोरा उठे । त्यसैबेला बुबालाई सम्झेँ जसले कोदालो खनेर कृषिकर्म गरेर नै जीवन बिताउनुभयो । मेरो हातमा उठेका फोरा कसैलाई देखाइनँ । झेङ्पाल उचाल्दै पछार्दै गर्दा केहि समयपछि ती फोरा फुटे । फोरा उठेर फुटे पनि काम गर्दै गएँ । मलाई त्यसबेला मात्र साह्रै कठिन भयो जब दुवै हातमा उठेका फोरा फुटेपछि त्यस ठाउँबाट रगत बग्न थाल्यो । रगत आएपछि अरूले पनि देखे । मैले त्यो एक दिन मात्र बाटो खन्ने काम गरेँ । भोलिपल्ट मेरा हत्केला सुनिएका थिए । कमला दिदीले थाहा पाएपछि गाली गर्दै सम्झाउनुभएको थियो । मेरो लागि जिनको पाइन्टको रहर धेरै नै महँगो साबित भयो ।
बी.ए. दोस्रो वर्षको परीक्षा दिएपछि म नेपाल आएँ । नतिजा प्रकाशित भयो । पहिलो पटकमा नै पास भएँ । फेरि मिजौराम पुगेँ । त्यसबेला निर्मल दाइले खट्ला बजार कमला दिदीकै घरमा खाद्य पसल खोल्नुभएको थियो । म केहि समय निर्मल दाइ, भाइ कुशल र परिवारका सदस्यसँग बसेँ । दाइ नारायण थापा प्रहरी इन्स्पेक्टरको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो । त्यही पढेकाले मलाई पनि सरकारी जागिरको सम्भावना थियो । निर्मल दाइ र मिनु दिदीले एम.ए. गरेर जान सल्लाह दिनुभएको थियो । एम.ए. नेपालबाट गर्दा नेपालमा जागिर खान सजिलो होला भन्ने सल्लाहले करिब ६ वर्ष ४ महिना त्यहाँ बसेर पुस २०३९ (दिसेम्बर १९८२)मा म मिजौरामका सुनौला यादहरू र बी.ए.को प्रमाणपत्र लिएर नेपाल फर्केँ । यो बीचमा मेरा मित्र एवम् दाइ छबु, दाइ रामसिंह गुरुङ, विक्रम गुरुङ, मित्र पदम क्षेत्री हामी बीच हुनुहुन्न भन्ने थाहा पाउँदा झस्केको हुँ ।
यो संस्मरण जिन पाइन्टको रहरबाट उब्जेको हो । तैपनि लामो भयो । त्यस्तै थुप्रै सम्झना ह्वारह्वार्ती आउँदा रहेछन् । त्यहाँको सबैभन्दा रमाइलो पर्व देउसीभैलो हुन्थ्यो । त्यसबाट उठेको रकमबाट आयोजना गरिने वनभोजमा ऐजल भरका गोर्खालीको विशाल जमघट हुन्थ्यो । त्यहाँ नाच्ने, गाउने, पिउने, प्रेमको प्रस्ताव राख्ने सबै हुन्थ्यो । वनभोजमा खिचेका रङ्गीन फोटोहरू धुन दिल्ली पठाइन्थ्यो । जाने पनि नजाने पनि, दुःखमा पनि सुखमा त्यहाँका कैयौँ स्थानीय साथीहरूलाई उछिन्दै त्यहाँका गोर्खा युवाले गरेका सबै कार्यक्रममा सक्रिय सहभागी बनेँ । कमला दिदीले कुँडिएर बस्न कहिल्यै दिनुभएन । रमाइलो गर्दा कैयौँ गल्ती पनि गरेँ । आपूmभन्दा ठूलाले भनेको मानेर तुरुन्तै सुधारेँ । मैले शारीरिक रूपमा जस्तोसुकै मेहनत र दुःख जे गरे तापनि साथीभाइसँग हिँड्ने कुरा मलाम जानेदेखि सिनेमा हेर्न जानेसम्मका काममा म खुम्चिएर बसिनँ । अन्तमा कमला दिदी र निर्मल दाइले दिएको बस र रेलको भाडासहित, प्रमाणपत्र, अनुभव र यादहरू साथमा राखेर मिजौरामसँग बिदा भएँ । इ.पू २७५० देखि इ.पू १७५० सिन्धु सभ्यताको सुनौलो युग भएझैँ मिजौराम मेरो जीवनको सुनौलो युग साबित भयो ।
नेपाल फर्केपछि अध्ययन, जागिर र परिवारको जिम्मेवारी सहितको झन् कठोर, झन् दुःखी र दर्दनाक जीवन प्रारम्भ भयो । मिजौराममा भएको सुनौलो युगबाट फेरि फलामे युगमा प्रवेश गरेँ । त्यो फलामे युग मिजौरामबाट फर्केपछि करिब २५ वर्ष रह्यो । योग्य, इमानदार र मेहनती भइएन भने क्षणभर सुख त होला तर जीवनको उत्तरार्धमा जुनबेला हड्डी खिइएको हुन्छ, छाला चाम्रिएको हुन्छ, मुखबाट ¥याल चुहेको हुन्छ र नसा फुल्न थालेका हुन्छन् त्यसबेला असह्य कष्टकर हुन्छ । त्यसबारे नयाँ पुस्ता कत्तिको सचेत छन् ? त्यो आज धेरै अभिभावकको गहन प्रश्न र पीडा पनि बनेको छ ।
पढ्ने अठोटका साथ जिनको पाइन्ट लगाउने रहर निमोठिन हुँदैन । अनि, जिन पाइन्टको लागि मात्र दौड्न त झन् हुँदै हुँदैन । मैले अल्लारे युवावस्थामा माझेको जुठा भाँडाको कालो मोसो अहिले मेरा औलाहरूमा छैन । मैले बाटो खन्दा उठेका हातका फोराहरू अहिले मेरा हत्केलामा छैनन् । त्यसलाई मैले सुनौलो युग मानेको छु । म सुखी छु । मलाई खान र बस्न कुनै समस्या छैन । त्यसैले आफ्नो सिरानीमा योग्यताको प्रमाणपत्र, शरीरमा जाँगर र छातीमा इमानदारीको मूर्ति हुने हो भने जीवनमा दुःख र आँसुले कहिल्यै बास पाउँदैन । मिठो खाने, जिनको पाइन्ट लगाउने मात्र होइन चिल्लो कार चढ्ने रहर पनि पूरा हुन्छ । त्यसले त आफूलाई मात्र होइन देशलाई पनि सम्पन्न र सभ्य बनाउन मद्दत गर्छ । मिजौराम ऐजलका मेरा अभिभावक एवम् अग्रजलाई नमन गर्दै मित्रहरूलाई मित्रताको न्यानो अभिवादनसहित आभार प्रकट गर्दछु । ॐ फोन ९८४१३७७०८३
विष्णु सर नमस्कार ।
यहाँले लेखेको संस्मरण अत्यन्त राम्रो लाग्यो । यस संस्मरणमा के छैन, इतिहास आएको छ, आप्mनो बाल्यकाल आएको छ, नेपालीहरूको इतिहास आएको छ, आप्mना अभिभावकले सोच्ने गरेका समयानुकूल विचार आएको छ । अनुसन्धानमूलक संस्मरणमा आप्mनो जीवनको अत्यन्त कष्टदायी जीवनयात्राको सन्दर्भ, लाहुर जाने नेपालीको यथार्थ स्थिति र त्यहाँ भारतमा अनन्तदेखि बस्ने नेपालीहरूले आज पनि डराइ डराइ बस्नुपर्ने बाध्यता आएको छ । त्यहाँका व्यक्तिहरूले नेपालीलाई हेप्ने प्रवृत्ति कस्तो खुलस्त यहाँले वर्णन गर्नुभएको छ, अत्यन्त खुसी लाग्यो । मैले यस लेखलाई दुई पटक पढेँ । आनन्द आयो । तपाईंले आप्mनो दुःख भएको र त्यस वेलामा गरिएका सम्पूर्ण कुरालाई जस्ताको तस्तै राख्नुभएको छ । यस्ता संस्मरणहरू निरन्तर आइराखून् । धेरै धेरै बधाई छ ।
यो ब्रह्म सबै तिमीलाइ
साभारः दायित्व मासिक माध–फागुन २०७६ ।
जुन भित्रको शितल मेरो माया तिमीलाई
उषाको आभासँगै सूर्यको किरण तिमीलाई
आकाशको गाम्भीर्य मेरो सबै तिमीलाई
समुद्रको विशालता मेरो सबै तिमीलाई ।
देउ ! बोझका तिम्रा पहाड सबै मलाई
देउ ! त्रासका तिम्रा सुनामी सबै मलाई
देउ ! मृत्युका तिम्रा भय सबै मलाई
देउ ! धोकाका तिम्रा पिडा सबै मलाई ।
झरेको हेर ! आँशु तिम्रो देख्नै सकिनँ
घाउँ ह्दयको हेर ! तिम्रो सहनै सकिनँ
विष निल्न तिम्रो नीलकण्ठ नभई सकिनँ
उषा ओठमा तिम्रो नदेखि बाँच्नै सकिनँ ।
कठै ! कति कमजोर प्राणी म नै रहेछु
‘जोत्न पर्छ टाउको चट्टानमा’ भन्नै भुलेछु
‘धारिलो शिशा हो जीवन घोचिरहन्छ’ भन्नै भुलेछु
आत्मनिर्भर हाँसो तिम्रो जीवनको देख्न ब्याकुल छु ।
ह्दय भरीको माया मेरो सबै तिमीलाई
आँखा भरीको दृष्टि उपहार सबै तिमीलाई
ज्ञान भरीको भकारी नासो सबै तिमीलाई
सत्यको हो सत्य, यो ब्रह्म* सबै तिमीलाई ।
Posted on February 3, 2021 by bishnunmdc
यो कथा रचना साहित्यिक पत्रिकाको पुष–माघ २०७७ को पुर्णाङ्क १६८ मा छापिएको छ । यसलाई धन्यवाद सहित ब्लगमा साभार गरिएको हो । धन्यवाद रचना परिवार ।
२०६३ सालमा मुगुको मुगुम गाउँदेखि पूर्व डोल्पाको साल्दाङ, मुस्ताङको दामोदर कुण्ड हुँदै मनाङको नार र फु गाउँसम्म अत्यधिक हिमपात र हिमचितुवाको बिगबिगी नै भयो । त्यो वर्ष एक गाउँको किसानले अर्को गाउँको गोठालोलाई भनेको सुनेको आधारमा एक सय भेडा, सातवटा चौरी र दुईटा घोडा त हिमपहिरो र हिमचितुवाको आहारा बनेछन् । नाउर, हिमालयन थार, झारल त हिमचितुवाको मुख्य आहारा नै भइहाल्यो । पर्वतको महाराज हिमाल भएझैँ हिमाली भेगको जनावरको राजा हिमचितुवा हो । हिउँ नहुँदा हिमालयको सौन्दर्य शृङ्गारविहीन नारीजस्तो देखिएझैँ उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमचितुवा भएन भने हिमाली क्षेत्र नै बुच्चो देखिन्छ । त्यसैले यो जनावर हिमालको गहना हो । स्थानीयलाई जति दुःख दिए पनि उनीहरूले यसलाई देवताका रूपमा उच्च सम्मान प्रकट गर्छन् । पूजा गर्छन् ।
त्यही वर्ष माघको अन्तिम सातादेखि फागुनको एक गतेसम्म नेपालको पश्चिममा रहेको उच्च हिमाली क्षेत्र र हिमालयभन्दा उत्तरका उपत्यकामा उच्च हिमपात भयो । असोजमा परेको हिउँले माथिल्लो लेकमा चर्दै गरेका धेरै याक, चौरी र भेडा हिमपहिरोमा परेर मरेको धेरै भएको थिएन । त्यसबेला चार जना गोठालाको ज्यान गएको थियो । त्यो वर्ष मङ्सिरदेखि चैतसम्म नै हिउँ प¥यो । हिउँ परेपछि गहुँ, उवा, फापर आलु बढी उब्जनी हुने भए तापनि मानव र पशुको मृत्यु हुने भएकाले दुई–चार पाथी उवा बढी फल्दैमा त्यसको क्षतिपूर्ति हुन सक्दैनथ्यो । दक्षिणतिर साउन–भदौमा मनसुनी वर्षाले बाढीपहिरो ल्याएर जनधनको क्षति गराएझैँ हिमालमा बेमौसममा अत्यधिक हिउँ पर्दा हिउँपहिरो र कठ्याङ्ग्रिने चिसो सिरेटोले ठूलो क्षति भयो ।
चिसा दिन लामा भए । ढुङ्गै–ढुङ्गाको गाह्रो, माटोको चेप्टो छानो, र अलिकति उज्यालो मात्र छिर्ने झ्याल भएको घरमा गुइँठा धुँवारेर आगो ताप्दाताप्दै घर कुर्न बसेका हिमाली क्षेत्रका बुढाबा र आमाले अर्को जाडो देख्न पाएनन् । बुढा याक र चौरी पनि उभिँदाउभिँदै गर्लम्म ढले । हिउँदको समय हिमाली गाउँहरू अन्टार्कटिक महादेश जस्तै हुन पुग्छन् जहाँ ओहोरदोहोर हुनै सक्दैन । नातागोता को कहाँ कस्तो अवस्थामा छन् थाहा पाउन चैत–वैशाख नै कुर्नुपर्छ ।
‘त्यो वर्ष प्रकृति दुःखी भइन् त्यसैले मानव र पशुको बढी नोक्सानी भएको हो’ भन्ने कुरा सबै गाउँका बासिन्दा र गुम्बाका लामाबीच चलेको थियो । ‘कुन गाउँमा कसले धर्मविपरीत काम ग¥यो त्यसैले प्रकृतिदेवी रिसाइन्’ महिलाहरू धुपीसल्लाको धूप बाल्दै प्रकृतिलाई नरिसाउन विन्ती बिसाउँदै थिए । तीर्थ गर्न गएका लामाहरू चैतको अन्तिममा बल्ल गाउँ फर्के । माथिल्लो डोल्पाको साल्दाङ, नामगुङ, रोक्योका गाउँले पनि लामाको व्यग्र प्रतीक्षामा थिए । लामा गाउँ फर्केपछि दिन हेरेर सबै गाउँलेले प्रकृतिको पूजा गर्ने योजना गरेका थिए ।
डोल्पा साल्दाङनजिकै नागाउँ खोलाको किनारमा ‘रोक्यो’ नाम गरेको एउटा सानो गाउँ छ । गाउँभन्दा माथि एउटा अग्लो पहाड छ । त्यो पहाड कालो, फुस्रो, खैरो र रातो रङ भएको ढुङ्गा र गेगरबाट बनेको छ । त्यो पहाडको शिरमा पुर्खाले बनाएको चार हजार वर्ष पुरानो एउटा ठूलो चोर्तेन (स्तूप) रहेको छ । त्यो स्तूप भित्र चारजना बसेर पूजा गर्न र बत्ती बाल्न मिल्छ । त्यो स्तूप वोन्पो गुरु सेनरेवको जन्म हुनुभन्दा पहिलेदेखि त्यहाँ थियो भनेर पुर्खादेखि भनिँदै र मानिदै आएको छ । चोर्तेन परिक्रमाको साँघुरो मार्ग भने साल्दाङको गुम्बा बनाउँदा त्यहाँका गाउँलेले ढुङ्गा चिनेर बनाएका हुन् । हरेक वर्ष वैशाख पूर्णिमामा पूजा गर्नुपर्नेमा तीन वर्षदेखि त्यहाँ पूजा गरिएको थिएन ।
चैतको महिना थियो । माथिल्ला चुलीहरूमा हिउँ पग्लेर तल्लो किनारमा नागाउँ खोला बढ्न थालेको थियो । रोक्योका गाउँले ८४ वर्षका सोनाम वाङ्जु लामाको घरमा पूजाको बारेमा सल्लाह लिनका लागि जम्मा भएका थिए । उनी सबैभन्दा जेठा थिए । पूजाको बारेमा सल्लाह मागेपछि उनले गाउँलेलाई भने “यी पाखा र पखेरा हाम्रा आमाबाबु हुन् । आमाको काख र माया तथा बाबुको मार्गदर्शन यसै भूमिबाट लिने हो । भूमिसँगै खेल्ने, हुर्कने, हाँस्ने–रुने र सन्तान जन्माउने र मर्ने हो । हाम्रा सन्तान भनेको हाम्रो यही जन्मको अर्को रुप हो । अनि, अन्तिममा प्रकृतिमा नै हामी विलीन हुने हो । सन्तानले हाम्रो जीवनलाई अर्को जीवन दिएझैँ गरी अगाडि बढाउँछन् । हाम्रो धर्म नै त्यही हो । हेर बाबु हो, प्रकृति दुःखी भइन् भने असोचनीय प्रकोप हुन्छ । त्यसैले पुर्खाले हामीलाई प्रकृतिको पूजा गर्न सिकाएका हुन् । रोक्यो पहाडमाथिको चोर्तेन हाम्रो पुर्खाले बनाएको गुम्बा हो । तीन वर्षदेखि पूजा नगरेको मात्र हो र ? कुन घरले त्यहाँ गएर नयाँ लुङदार टाँग्यौँ ? लौ भन त । अनि प्रकृति दुःखी नभए को हुन्छ त ? प्रकृति दुःखी भइन् । हामीलाई दुःख प¥यो ।”
‘अब के गरौँ त बाजे ?’ साल्दाङको गुम्बामा अध्ययन गर्दै गरेका युवा सोनाम लामाले सोधे । घरधनी डोल्मा छिरिङ रोकायाले सबैलाई नुनचिया दिँदै स्वागत गरिन् । त्यहाँको परम्पराअनुसार सबैले एक–एक सुर्की पिएपछि उनले पटकपटक चिया थप्दै भर्दै गइन् । त्यसको केही बेरमा उनले सबैलाई छ्याङ दिइन् र त्यसरी नै थप्दै गइन् । सुरुमा सबैले पर्दैन–पर्दैन भने तापनि पछि धन्यवाद दिँदै छ्याङ् पिउँदै पूजाको बारेमा छलफलमा जुटे ।
“माथिको चोर्तेनमा पूजा गर्ने मात्र होइन । सबैभन्दा पहिले सरसफाइ र मर्मत गर । सोनाम तैँले दिन हेर । मिलेसम्म साल्दाङबाट मूल लामालाई एक दिनको लागि बोलाऊ । सबै भेला भएर हिउँ र पहाडसँग माफी माग्दै प्रकृतिको पूजा गर । हाम्रो गाउँमा हेर एकजना भाइ लेकमा नै म¥यो । कति भेडा मरे, कति याक र चौरी मरे; यस्तो विपद् प¥यो । सकेसम्म छिटो गरिहाल । बुद्धपूर्णिमा पनि आउँदैछ । त्यो दिन साइत हेर्नुपर्दैन” वाङ्जुले भने ।
चैतको अन्तिम सातादेखि दार्चुला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, मुस्ताङका गाउँमा चहलपहल सुरु हुन थाल्यो । केटाकेटी, गोठाला, भेडाच्याङ्ग्रा, चौरी र याक कल्याङमल्याङ गर्दै तल्लो लेकबाट माथितिर उक्लेका थिए । तिनीसँगै हिमाली काग, ढुकुर, मुनाल र भँगेराको चिरबिर पनि सुनिन थाल्यो । नाउर उनीहरू भन्दा माथि उक्ले । नाउरभन्दा अग्ला लेखमा हिउँचितुवा सर्दै उक्लँदै गए ।
एक सातामा नै सबैको घरमा वसन्त ऋतुमा पुराना पात झरेर नयाँ पालुवा आएझैँ खुसियाली आयो । त्यसबेला घरका लुगाफाटो, भाँडाकुँडा, आँगन र मझेरी, बारीका सुर्का सबै खुसीमा रम्न थाले । गाउँलेको घरमा ल्होसार पर्वमा रमाइलो भएजस्तै खेतीपाती लगाउने बेलामा खुसियाली छाएको थियो । सबैले नुनचिया र छ्याङ पिउँदै काममा तल्लीन भए, असारमा औलमा किसान व्यस्त भएझैँ । प्रकृति र मानिस, जीवन र मृत्युजस्तै एकअर्कामा सत्य भएर रहेका छन् । प्रकृतिमा बैँस फक्रँदा मानिसमा पनि चञ्चलेपन देखिन्छ । चिसो छल्न आफ्ना प्रायः सबै सदस्य र पशुसहित बेँसी झरेका गाउँले चैतको अन्तदेखि उकालो लागेर घर फर्कन थालेको हुनाले हिमाली गाउँमा महाभारतका शृङ्खलाका भिराला पखेरामा वसन्त झरेझँै खुसियाली आँगनमा झरेको थियो ।
हिउँ जमेर ओसिएका फुस्रा पाखामा पाइने गेरु, कमेरो, पहेँलो, फुस्रो माटोले लिपेर गुम्बा, चोर्तेन, स्तूप र कानीचोर्तेन चिटिक्क पारिए । मरेका आफन्तको बाँकी संस्कार सम्पन्न भयो । मर्ने मरेर गए पनि बाँच्ने मर्नेसँग जानुहुँदैन । जान सकिँदैन । असह्य पीडा हुन्छ । पीडामा धरती पनि त रुन्छिन् । समयले त्यो पीडालाई हिमाली जडीबुटीले घाउमा माम्री बनाएर सञ्चो बनाइदिएझैँ आफन्तको मृत्युको पीडालाई पुरिदिन्छ । कानी चोर्तेनको दलिनको मण्डला भित्तेचित्रमा देखाइएजस्तै जीवनचक्र चलिरहन्छ । त्यो चक्र मानवले थाहा पाउने, सम्झने, आफन्त भन्ने, नाता र कुटुम्ब जोड्न जान्ने भएदेखि घुमिरहेको छ । प्रकृतिमा एउटा पूmल फुलेर त्यो पूmल सुकेर झर्नेबेलासम्म त्यसको जराबाट नयाँ टुसा पलाएझैँ मानिसका पनि सन्तान जन्मन्छन्, तीनले वंश वृक्ष धान्छन् । पूmलको बिउ रहेझँै मानवको सन्तानको रूपमा मानव वंश रहन्छ । ती सन्तानले मानव जातिलाई जोगाइरहेका हुन्छन् । सत्यता त्यही नै हो ।
रोक्योमा पनि सबै गाउँले मिलेर चोर्तेन मर्मत गरी नजिकको पहाडबाट गेरु र कमेरो ल्याएर लिपे । चोर्तेनसहित वरपरका पहाडमा पनि लुङ्दार टाँगे । चोर्तेन मर्मत गरेपछि रोक्योका गाउँलेले त्यही मौका पारेर घरआँगनको सरसफाइ गरे, आ–आफ्नो घरमा लुङदार टाँगे । सबैले छ्याङ र रक्सी पारेर मिठोमिठो खानेकुरा तयार पारे । बुद्धपूर्णिमाभन्दा पहिले नै गाउँमा पूजा परेको हुनाले सबैले तयारी गरेका थिए । त्यसैकारणले गाउँको रूप पनि सुन्दर देखियो । मध्ये पहाडमा दशैँमा केटाकेटी, बुढाबुढी सबैका अनुहारमा खुसियाली छाएझैँ त्यहाँ खुशियाली हिमालको पखेराबाट ओर्लेर रोक्योको आँगनमा झरेको थियो ।
सोनामले साल्दाङबाट लामालाई लिएर आए । २०६४ साल वैशाखको पहिलो सातामा दिनभर गाउँलेले पूजा गरे । आकाश, हावा, पानी, आगो, पहाड, हिमाल, हिउँ, वन, खोला, पशुपक्षी, जडीबुटी, जनावर सबैलाई सम्झँदै धूपबत्ती बाल्दै, पूजा गर्दै लामाले मन्त्रोच्चारण गर्दै भने “प्रकृतिमाता हाम्रो गल्तीमा क्षमा पाऊँ । तिमी आमा हौँ । तिमी पिता हाँै । तिमी आफ्नो ठाउँमा बस । हामी हाम्रो ठाउँमा बस्छौँ । बिगार्ने हामी मानव हौँ । अब सुधार्छौँ । समयमा हिउँ परोस् । अति हिमपात नहोस् । हाम्रा सन्तानलाई दुःख नहोस् । पितृ आफ्नो ठाउँमा बसून् । नदी निरन्तर बगिरहून् । घाम लागिरहोस् । खेतीपाती राम्रो होस् । पशुको सङ्ख्या बढोस् ।”
डोल्मा छिरिङ रोकायाको परिवारले पनि चोर्तेन र घर दुवै ठाउँमा मन लगाएर पूजा गरे । पूजाको बेला उनका पति ग्याचो रोकाया र छोरा ल्हाक्पा रोकाया पनि घरमा आएका थिए । सबै मिलेर पूजा गरेको र ज्वाइँ र नाति पनि घरमा आएको हुनाले बाजे सोनाम वाङ्जु खुसी देखिन्थे । याक, चौरी र भेडा तल्लो लेकबाट रोक्योमा ल्याइसकेका थिए । दुई साता वरपरका लेकमा चराएर माथिल्लो याकखर्कतिर लैजाने सोच सबै गाउँलेको थियो । सोनाम वाङ्जुका छोरा नभएको हुनाले ग्याचो माइतमा नै घरजम गरी बसेका थिए ।
“यसपटक हिउँ धेरै प¥यो । किगु लेकतिर कीरा (यार्सागुम्बा) राम्रो उम्रन्छ । जेठको आधातिर छोरालाई भेडा त्यतैतिर लैजा भनौँ । हामी दुवैजना मिलेर यसपटक यार्सागुम्बा खोजौँ । अब उमेर ढल्कन थाल्यो । आगामी हिउँदमा बौद्धनाथ, स्वयम्भूनाथ र लुम्बिनी तीर्थ गर्न जान मन लागेको छ ।” पिता वाङ्जु, लोग्ने ग्याचो, छोरा ल्हाक्पा र आपूmलाई छ्याङ थप्दै डोल्माले भनिन् ।
“जानुपर्छ एकपटक । म छँदै जाओ । म घर हेर्छु ।” बाजे वाङ्जुले थपे ।
“हुन्छ नि त । कीरा राम्रै भेट्यो भने खर्चको पनि दुःख हुँदैन ।” ग्याचोले छ्याङ पिएर गिलास भुईंमा राख्दै भने ।
“चौरी र भेडाको पीर मान्नुपर्दैन । यार्सागुम्बा र पोहोर सालको जडीबुटीले खर्च पुग्छ । नपुगे दशैँमा भेडा बेचेर तिरौँला । अलिकता पैसा सापटी लिएर भए पनि आमालाई लिएर जाऊ ।” छोरा ल्हाक्पाले आमालाई समर्थन गर्दै बाबुलाई भन्यो ।
रोक्यो साल्दाङ छेउको छ–सात परिवार मात्र बस्ने सानो गाउँ हो । चारैतिर अग्ला फुस्रा पहाडले घेरिएको रोक्यो नागाउँ खोलाको किनारमा रहेको छ । त्यो वृक्षविहीन क्षेत्र हो । त्यहाँ चार फुटसम्म अग्ला काँडाका झाङबाहेक अरू केही हुँदैन । त्यहाँ खेती गर्ने जग्गा कम छ । बारीमा फल्ने उवाले मुस्किलले चार महिना पुग्छ । यार्सागुम्बा, जडीबुटीले चार महिना धान्यो भने बाँकी चार महिना भेडा बेचेर खर्चको जोहो गर्ने गर्छन् यहाँका बासिन्दाले । खेती र यार्सागुम्बा राम्रो नभएको बेला वल्लोपल्लो गाउँमा काम गरेर गर्जो टार्ने गरेका छन् । डोल्माको परिवार पनि त्यस्तै हो । त्यसैले उनले हरेक वर्ष काठमाडौँ र लुम्बिनी जाने योजना गरे तापनि त्यो पूरा भएको थिएन ।
“जेठमा यार्सागुम्बा टिप्न किगुलेक जानको लागि तिमीले पाल मर्मत गर । साल्दाङ गएर चाउचाउ र पिठो लिएर आऊ । मैले खाने कुराको जोहो गर्छु । बर्खापछिको हिउँदमा जाडो पनि छल्ने र सोही मौकामा काठमाडौँमा जडीबुटी र यार्सागुम्बा बेचौँला र तीर्थ पनि गरौँला । त्यसपछि पनौति र लुम्बिनी पुगेर फर्कौँला । बुद्धपूर्णिमाको साँझ मिठोमिठो खानेकुरा र छ्याङ पिउँदै डोल्माले लोग्ने ग्याचोलाई भनिन् । बाहिर पूर्णिमाको उज्यालोमा नागाउँ नुनेखोलाको पानी टलटल टल्केको थियो ।
उवा फापर छरेपछि छोरा ल्हाक्पा रोकाया अरू दुई साथीसँग गाउँका याक, चौरी र भेडा लिएर लेकतिर लाग्यो । लेक जाने काम पालैपालो गर्ने गर्छन् । त्यसो गर्दा घर रित्तो पनि हुँदैन, लेकको काम पनि रोकिदैन ।
तीनजनाको लागि पुग्ने पाल, तीन साताको लागि खाना, छ्याङ, भाँडाकुँडा सबै तयार गरेर दुवैजना अरू गाउँलेसहित किगुलेकतिर लागे । त्यो वर्ष साँच्चिकै अन्य वर्षको तुलनामा यार्सागुम्बा राम्रै उम्रेको रहेछ । पन्ध्र दिनसम्ममा डोल्माले १००, ल्हाक्पाले १३० र ग्याचोले २०० कीरा जम्मा गरे ।
“यति भएपछि पुग्छ भोलि घर फर्कौँ । घरमा बुढाबा पनि एक्लै छन्” डोल्माले बाबु र छोरासँगै भएको बेला भनिन् ।
“हुन्छ । जानू ।” मैले भेट्यो भने ल्याउँला भन्दै छोराले समर्थन ग¥यो ।
“म हिजो गएको ठाउँमा अलि बाक्लो भेटेको छु । भोलि त्यति टिपेर ल्याउँछु, अनि पर्सि जाउँला ।” ग्याचोले भने । त्यसपछि अरू कसैले केही भनेनन् ।
“भीरतिर नजाऊ है । अनि उज्यालोमै फर्क । अँध्यारो नपार नि ।” डोल्माले जानेबेलामा पतिलाई सम्झाइन् । “हुन्छ” भन्दै ग्याचो लेकतिर उकालो लागे । त्यसबेलासम्म गाउँका सबै लेकमा नै थिए कोही घर फर्केका थिएनन् ।
त्यो दिन डोल्मा लेक गइनन् । सामान सफा गर्दै पट्याएर एक ठाउँमा राखिन् । अपरान्हपछि मौसम एकाएक खराब भयो । बाक्लो हुस्सु लाग्यो । चार–पाँच फिट टाढा पनि देखिएन । डोल्माको मन अनायासै अत्तालिन थाल्यो । अत्तालिनु र पिरोलिनुबाहेक त्यहाँ अरू केही उपाय पनि थिएन । त्यहाँ न त फोन थियो न त नजिक कोही मानिस नै । घाम अस्ताउने बेलासम्म नै मौसममा सुधार भएन । उल्टै हिउँ पर्न थाल्यो ।
“आमा, बाबा खोइ त ?” रिमरिम दिनको उज्यालो छँदै ल्हाक्पा चिसोले कठ्याङ्ग्रिँदै पालभित्र छि¥यो ।
“बाबासँगै आउँछ होला भनेको त एक्लै पो आएछ । खोइ त बाबा ? बाबा त आएकै छैनन् नि । बाबा कतै अप्ठेरोमा त परेनन्, मलाई बिहानैदेखि डर लागेको छ ।” डोल्माले भनिन् ।
झमक्कै साँझ प¥यो । ग्याचो आएनन् । टर्च बाल्दै दुवै आमाछोरा गाउँलेका पालमा ग्याचोको खबर बुझ्न गए । सबैका परिवार पालमा जम्मा भइसकेका थिए । ग्याचो मात्र आएका थिएनन् । कुहिरो नलाग्दासम्म वल्लो पाखाबाट पल्लो पाखामा ग्याचोलाई देखेको एकजना छिमेकीले बताए । त्यो पाखामा पुग्न एउटा ठाडो भीर चढ्नुपर्ने भएकाले त्यहाँ अरू गाउँले गएका थिएनन् ।
राति ११ बजे बल्ल डोल्मा र उनको छोरा आफ्नो पालमा फर्के । “हामी उसलाई खोज्न जाँदा कतै बाबा हाम्रो पालमा आइपुग्यो कि ?” डोल्माको मनमा त्यस्तै कुरा खेलेको थियो तर ग्याचो आएका थिएनन् । त्यो रात आमाछोराले खाना पनि खाएनन् र सुत्दा पनि सुतेनन् । कतैबाट आइहाल्छ कि भन्दै कुरेर बसे । बिहानीपख हिमाली भँगेरा चिरबिर गर्न थालेको बेला झपक्क आधा घण्टा निदाएछन् ।
भोलिपल्ट लोग्नेमानिसहरू सबै मिलेर ग्याचो गएको लेकमा गए । ग्याचो वरपर कतै थिएनन् । एकजना गाउँलेले ग्याचोको थरमसको बिर्को, टोपी र खाजा बोकेको झोला अग्लो भीरको काँडाको झाङमा अड्केको देखे । ‘यी यहाँ रगतको टाटो रहेछ’ ढुङ्गामा लागेको रगत देखाउँदै अर्कोले भन्यो । भीर अग्लो थियो र भीरको फेदमा अर्को बाटो भएर जानुपर्दथ्यो । गाउँलेले अनुमान गरे कि ग्याचो भीरबाट लडेछन् । त्यो दिन त्यसबाहेक अरू केही खबर पाइएन ।
सबैका पालमा रुवाबासी हुन थाल्यो । डोल्मा अघिल्लो साँझदेखि नै अलापविलाप गरेकी थिइन् ।
“मैले त घर जाऊँ भनेकी थिएँ । ‘आज एक दिन मात्र जान्छु’ भन्यो । मलाई एक्लो पार्न त्यसो भनेको रहेछ । हे भगवान् तिमीले मलाई कति अन्याय गर्छाैँ । यसपटक तीर्थ गर्न जाने भनेकै थियौँ । हाम्रो प्रार्थना किन सुनेनौँ ।” भन्दै लेक नै थर्कने गरेर रुन थालिन् ।
“धेरै न रो बिमार लाग्छा । भगवान्लाई साम्झी केही भएको छैना होला । आज सबै गएर लिएर आउँछा ।” गाउँका आफन्तले दिनभर सम्झाउँदै भने ।
घटनापछि यार्सागुम्बा खोज्ने काम अरू गाउँलेले पनि छोडे । अर्को दिन बिहानै भीरको पूर्वतिरको पखेरोभन्दा माथि दुईटा गिद्धले दुई चक्कर लगाएर द्योतरापतिरको लेक नाघे । त्यसपछि भने गाउँले डराउन थालेका थिए । आपूmसँग भएको डोरी, खुकुरी सबै बोकेर गाउँले त्यो भीरको पूर्वी पखेरातिर गए । दिउँसो बाह्र बजेतिर एकजनाले ‘उ… त्यो पहरोको चेपमा हेर त त्यहाँ खँदारिएको ग्याचो काका नै होइन त ?’ भन्यो ।
ठाउँ अप्ठेरो भएकाले सबैले पालैपालो हेरे । उसको टाउको शरीरमुनि चेपिएको थियो । मानिस उभिन मिल्ने ठाउँभन्दा करिब चालीस फिट तल ग्याचोको टाउको ढुङ्गाको चेपमा कोचिएको थियो । माथिबाट बल्ड्याङ खाँदै भीरबाट एकैचोटि चालीस फिट तल बजारिएको र टाउको उँधो चेपिएको हुनाले प्राण हुने कुरामा गाउँलेले शङ्का गरे । सबै डोरी जम्मा गरेर गाँठो पारे । डोरीलाई भीर नजिकैको एउटा चुच्चो परेको ढुङ्गामा बाँधे । छोरा ल्हाक्पा र ल्हाक्पाको साथी फुर्वा बैजी दुईजना पालैपालो गरी डोरीमा झुण्डिएर तल झरे ।
“पूरै आइस भएको छ । केको प्राण हुनु” बैजीले भन्यो । ग्याचोको प्राणपखेरु पहिलो रातमा नै उडिसकेको थियो । अघिल्लो साँझको हिउँले चिसो भएर जमेको हुनाले ग्याचोको लास तान्न ती दुईलाई धेरै कठिन भयो । आधा घण्टा लगाएर बडो कठिनसाथ लासलाई चेपबाट बाहिर निकाले । चेपबाहेक त्यहाँ राम्रोसँग उभिन मिल्ने ठाउँ पनि थिएन । लासलाई डोरीले बाँधे र गाउँलेलाई तान्न भने । गाउँलेले तानेर माथि राखे । त्यसपछि पालैपालो पहिले बैजी अनि छोरा ल्हाक्पालाई माथि ताने । सबैले ग्याचोको लास बोकेर पाल भएको ठाउँमा लगे । लासलाई देख्नासाथ डोल्मा मूर्छा परिन् । दुई रातदेखि उनले खाना खाएकी थिइनन् र सुतेकी पनि थिइनन् ।
एकजना केही पहिले गएर लामालाई खबर गरे । सबै मिलेर ग्याचोलाई गाउँको दाहसंस्कार गर्ने ठाउँमा नै लगेर दाहसंस्कार गरे । करिव आठ–आठ फिट जति लामा पखेटा भएको गिद्धको राजाले साल्दाङ उपत्यकामा दुई चक्कर लगायो । त्यसको केहीबेर पछि अन्य गिद्धहरू पनि देखिए ।
वर्षभर नै दुःखद घटना डोल्मालाई मात्र परे । वृद्ध बाबुबाहेक डोल्माको आफ्नो भन्ने कोही थिएनन् । मानिसलाई जे जस्तो भवितव्य परे पनि कालले निम्ता नदिएसम्म बाँच्नुपर्दो रहेछ ।
डोल्मा एक दिन डोकोमा गुइँठा र काँडाका सुकेका झिँजा बटुल्दै नागाउँ खोलाको माथिल्लो किनारमा पुगिन् । डोको भित्तामा अड्याएर खोलाको तीरमा ढुङ्गामाथि टुसुक्क बसिन् । पारिको पखेरामा नाउर चर्दै थिए । साना भँगेरा चिरबिर गर्दै यताउता उड्दै थिए । नाउर चर्दै गरेको पखेरातिर हेर्दै एक्लै विलौना गर्दै डोल्माले भनिन् “आमा मैले के विराम गरेँ र ? मलाई यति दुःख दियौँ । छोराको बाबुलाई त लग्यौँ लग्यौँ मेरो सहारा, मेरो आधार, मेरो भविष्य मेरो छोरालाई पनि किन लग्यौँ ? छोरालाई लैजानभन्दा त मलाई लगेको भए हुन्थेन ?” झमक्क साँझ परुञ्जेल खोलाको किनारमा रुँदै बसिन् । गाउँतिरबाट कुकुर भुकेको सुनेपछि मात्र जुरुक्क उठिन् । डोको बोकेर घरतिर लागिन् ।
बाटोमा हिँड्दै गर्दा उनले छोरालाई सम्झिन् । बाबु भीरबाट खसेकै वर्ष छोरा ल्हाक्पा र फुर्वा बैजी भएर दशैँको बेलामा भेडा बिक्री गर्न जोमसोम गएका थिए । छोरासँगै गएको साथी एक्लै घर आएको देख्दा उनले झस्कँदै सोधेकी थिइन् । ‘ल्हाक्पा खै त फुर्वा ?’
आँखाभरि आँसु पार्दै बैजीले भनेको थियो “आमा हामी भेडा लिएर जाँदै थियौँ । छार्कादेखि तीन दिन हिँडेर मुस्ताङको साङ्ता पुग्नुभन्दा अघिल्लो रात हिउँ प¥यो । हामी ओडारमा थियौँ । भोलिपल्ट उठेर विस्तारै अघि बढ्यौँ । आलो हिउँ दुई फिट जति थियो । चारवटा भेडा हिउँपहिरोमा परेर मरे । अरू भेडालाई बचाउन खोज्दा ल्हाक्पा पनि हिउँको पहिरोमा प¥यो । आमा म डरलाग्दो विपदमा परेँ ।”
आँसु पुछ्दै बैजीले भन्यो “तीन घण्टा लगाएर खोजेँ । एउटा भेडा र उसलाई भेटेँ । त्यसबेला भेडा र ल्हाक्पा दुवैको ज्यान गइसकेको थियो । मैले भेडाको बथानलाई साङ्ताको पाखामा पु¥याए । त्यहाँ गाउँलेसँग सल्लाह गरेर लामालाई राखेर त्यही दाहसंस्कार गरेँ । पाँच दिनसम्म म साङ्ता नै बसेँ छार्कातिर जाने कोही भेटिनँ । खबर गर्न पनि पाइनँ । त्यसपछि भेडा बेच्दै बेनीसम्म पुगेँ । त्यहाँबाट जाजरकोटसम्म ट्रकमा गएँ । त्यसपछि भेरीको किनार हुँदै दुनै पुगेँ ।”
डोल्माले दिएको चिया पियो । फेरि आँसु पुछ्दै फुर्वा बैजीले भन्यो “ल्हाक्पा त मेरो साथी मात्र कहाँ हो र आमा ऊ त मेरो हृदयको टुक्रा हो । उसको सम्झनामा से–गुम्बा पुगेर बत्ती बालेँ । त्यसपछि म सरासर मेरो घरमा नपसीकन सिधै यहाँ आएको हुँ ।” नून, चियापत्ति, औषधी, केही कपडा आमाको हातमा राखिदियो । ‘दाहसंस्कारमा लागेको खर्च मैले गरेको हुँ । नून, चियापत्ति, औषधी, कपडा भेडा बिक्री गरेको पैसाले किनेको हुँ । बाँकी पैसा यहीँ छ’ भन्दै भेडा बेचेर रहेको बाँकी पैसा ल्हाक्पाकी आमाको हातमा राखिदियो । त्यसबेला ऊ तीन दिन आमासँगै बसेको थियो । छोराको दुर्घटना सम्झँदासम्झँदै घर पुगेको चालै पाइनन् डोल्माले । मनमनै छोरालाई समेत सधैँको लागि बिदा गरेर पनि बाँच्नुपर्ने रहेछ भन्दै गुइँठाको डोको घरबाहिर राखिन् र आपूm भित्र पसिन् ।
पति मरेको एक वर्ष र छोरा मरेको नौ महिना भएको थियो । असारको महिना थियो । एक गोधूली साँझमा नाउरहरू पहराको चेपतिर उक्लँदै थिए । अस्ताउँदो सूर्यको किरणले वरपरका पहाडमा रहेका हिउँले ढाकिएका पर्वतमालाको छाती सुवर्णमय देखिएको थियो । रोक्यो गाउँका गर्गरे ढुङ्गे पखेरा पनि अस्ताउँदो सूर्यको प्रकाशमा मधुरो रूपमा पहँेलपुर बनेका थिए । अस्ताउँदो सूर्यलाई मुस्काउन मन लागेको हुनाले त्यो दिन चञ्चलासुन्दरी बादल पश्चिममा अपी हिमाललाई नाघेर नेपालका पुर्खा पुगेको ठाउँ सतलजको किनारतिर पुगेकी थिइन् ।
उनले दिनभर गुइँठा खोज्दा लागेको हातको गोबर नागाउँको नुने खोलामा गएर पखालिन् । फलामको एक मुखे चुलोमा गुइँठा हालिन्, सुकेको घाँस सलाइले बालिन् र चुलोको तलबाट भित्र छिराइदिइन् । माथिबाट पनि सुकेको घाँस थपिन् र बन्द गरिदिइन् । पुत्ताउन थालेपछि पुरानो कुच्चिएको कालो कित्लीमा पानी बसालिन् र गोठतिर जान बाहिर निस्किन् । त्यसैबेला एकजना अधबैँसे पुरुष उनको घरतिर आउँदै गरेको देखिन् ।
पुरुषले नमस्ते ग¥यो । डोल्माले ‘नमस्ते’ फर्काउँदै ‘मैले चिनिनँ नि’ भनिन् । ‘म कर्मा छिरिङ लामा हुँ । मेरो गाउँ नामगुङ हो । कामले साल्दाङ आएको थिएँ । मेरो घोडा यतैतिर आएको छ भन्ने खबर पाएर खोज्दै हिँडेको हुँ । आज यतै बास बस्न प¥यो । राति नै उठेर लेकतिर जान्छु ।’ त्यो पुरुषले आफ्नो सामान्य जानकारी दिँदै डोल्मासँग त्यो रातको लागि बास माग्यो ।
उनले ‘हुन्छ’ भन्दै उसलाई भित्र बाबुसँग गफ गर्दै गर्न भन्दै कपमा चिया राखिदिइन् । थप्दै खान भन्दै थरमस अगाडि राखेर गोठमा गइन् । बेलुका खाना खाएर सुते । त्यो मानिस राति नै उठेर घोडा खोज्न लेकतिर गयो । त्यो साँझ पनि रित्तै फक्र्यो । त्यही नै पाहुना भएर बस्यो । भोलिपल्ट भने ऊ घाम नअस्ताउँदै खुसी हुँदै घोडा लिएर फक्र्यो ।
त्यो दिन डोल्माले छ्याङ् राखिदिइन् । त्यसबेला उनले आफ्नो पति र छोरा बितेको सबै घटना आँखाबाट बलिन्धारा बर्साउँदै बताएकी थिइन् । गफ गर्दागर्दै झमक्कै साँझ प¥यो । तेस्रो रात पनि ऊ त्यहीँ घरमा बास बस्यो । त्यो रात किनकिन डोल्माले उसलाई अलि बढी सत्कार गरिन् । उनले आफनो घरमा दुई वर्षपहिले बनाएको रक्सी झिकेर बाबा र पाहुनालाई दिँदै ‘पुरानो रक्सी हो । तीर्थ गर्न जाने बेला बाटोमा खाउँला भनेर रोखेकी थिएँ । बाबुछोरा दुवैले एक्लो पारेर गइहाले । आज बल्ल झिकेको हो । मिठो छ, खाऊ ।’ भनिन् । त्यसैबेला भेडाको सुकुटी पानीमा उमालेर चौरीको नौनी घिउमा मज्जाले भुटिन् । भेडाको चाम्रो सुकुटी चबाउँदै उनीहरू लामो समय दुःखसुखका कुरा गरे ।
रक्सी पिउँदै कर्मा छिरिङले पनि परिवारको बारेमा भन्यो “तीन वर्ष पहिले बच्चा जन्माउन नसकेर मेरी श्रीमतीले मलाई छोडेर गइन् । नामगुङ रोक्योभन्दा झन् सानो र रुखो छ । खेतीले दुई महिनालाई पनि खान पुग्दैन । त्यसैले हामीले भेडा पाल्छौँ ।” भोलिपल्ट कर्मा बिदा भएर घोडा चढेर साल्दाङतिर लाग्यो । डोल्मा बारीमा पसिन् .
त्यसको आठ महिनापछि फागुनमा कर्मा फेरि रोक्योमा देखाप¥यो । ऊ सरासर डोल्माको घर गयो । त्यसबेला चारैतिर हिउँ नै हिउँ थियो । गाउँका मानिस तीर्थ गर्न र जाडो छल्न गएर फर्केका थिएनन् । रोक्योमा पनि औधी चिसो थियो । नागाउँ खोलामा पूरै आइस जमेको थियो । आइसमुनिबाट कुलुलु गर्दै पानी बगेको देखिन्थ्यो । सोनामले कम्बल ओढेर चुलोनजिकैको बिस्तारामा बस्दै छ्याङ पिउँदै थिए । डोल्माले कर्मालाई पनि चियासँगै अर्को कपमा छ्याङ राखिदिइन् र आलु काट्न थालिन् । कुकरमा भात पाकिसकेको थियो । पन्ध्र वर्ग स्क्वायर फिटको त्यो घरमा झ्यालको नाममा एउटा सानो प्वाल थियो । हिउँदको बेला चिसोबाट बाँच्न पुरानो कपडा कोचेर त्यही झ्याल पनि बन्द गरिएको थियो ।
खाना खाएपछि छ्याङ पिउँदै कर्माले डोल्मालाई “मसँग तीन सय भेडा छन् । मेरो सम्पत्ति त्यत्ति हो । घर यस्तै सानो छ । म एक्लै छु । पोहोर साल यहाँ बास बसेदेखि मेरो घरमा बस्न मन लागेन । तिमीलाई आपत्ति पर्दैन भने म एउटा कुरा भन्न आएको हुँ । भनौँ ?” भन्दै अनुमति माग्यो ।
“के कुरा हो, भन न । किन सोध्नुप¥यो र ?” डोल्माले भनिन् ।
“तिमीले स्वीकार गछ्र्याै भने म तिमीलाई बिहे गर्न चाहन्छु । मेरो पनि अरू कोही छैन । एउटा छोरा छ, त्यो गुम्बामा बस्छ । एक्लो जिन्दगी समय नै बित्दो रहेनछ । मैले कमाएको धन सम्हाल्न पनि सकिनँ । मैले त हिउँद, वसन्त, बर्खा जहिलेसुकै उजाड मात्र देख्न थालेँ । म काम गर्न सक्छु । मलाई तिम्रो साथ र तिमीलाई मेरो साथ हुन्छ । आडभरोसा हुन्छ । कसैलाई मार्न, काट्न, दुःख दिन पो हुँदैन । एकअर्कालाई प्रेम गर्नु, एकअर्कालाई सहयोग गर्नु त हाम्रो धर्म हो ।” उसले भन्यो ।
“विवाह !” आश्चर्य मान्दै डोल्माले भनिन् “के भनेको तिमीले ? म त तीन बीस दुई वर्षकी भइसकेँ । तिमी उमेरको मानिस । अब के बिहे गर्ने ! तिमी मभन्दा धेरै सानो छौ ।”
“औलको जस्तो हिमालमा हुँदैन । डोल्मा तेरो सानीआमाले पनि तीनैजना सानोबाबाहरु मरेपछि गाउँको टाढाको देवर पर्नेसँग बिहे गरेर घर राम्रो हेरेकी थिइन् । म मरेपछि तँ एक्ली हुन्छेस् । कर्माको बानीव्यहोरा र प्रस्ताव मलाई राम्रो लागेको छ । दश–बाह्र वर्षले त तेरो उमेर बढि होला ? उमेरले केही हुँदैन ।” डोल्माका पिता सोनामले आफ्नो सुझाव राख्दै भने ।
“तिमी म भन्दा सानो छौ । जिद्दी नगर । मेरो जीवन त दुःखको हिउँको थुप्रो हो मलाई त्यसैमा कठ्याङ्ग्रिन देऊ ।” डोल्माले आँखाभरि आँसु पार्दै भनिन् ।
“हेर डोल्मा लोग्नेस्वास्नीको मायामोह र सहयोग बच्चा पाउनको लागि मात्र होइन । हाम्रो धर्ममा पुनर्जन्मको कुरा गरे पनि पुनर्जन्मको लागि भनेर यो जन्ममा दुःख गरेर केही फाइदा हुँदैन । न त कसैले पूर्वजन्म देख्यो न त कसैले पुनर्जन्म नै । कसैलाई दुःख नदिईकन यो जीवनमा नै सुख काटेर मोक्ष प्राप्ति गर्नु नै उत्तम धर्म हो । भगवान् र हामी त्यसैमा खुसी र सुखी हुन सक्छौँ । हामी दुई एक भयौँ भने हामी दुवैलाई बाचुञ्जेल दुःख हुँदैन । म तिमीभन्दा दश वर्ष सानो छु । मेरो कुरालाई स्वीकार गर, हामी दुवैलाई सुख हुन्छ । तिम्रो दुःखको घाउ पनि सञ्चो हुन्छ । त्यसैको लागि मात्र म यहाँ आएको हुँ ।” सहरबजार घुमेर, लेकबेसी गरेर आर्जन गरेको अनुभव सुनाउँदै कर्माले आफ्नो कुरा प्रष्टसँग राख्यो र छ्याङ तनक्क पियो ।
गाउँका छिमेकी भेला भइसकेका थिए । डोल्मा र कर्माको कुरा सुनेपछि उनीहरू सबै खुसी भए । उनीहरू सँगै बस्न थाले । त्यो वर्ष राम्रो हिउँ प¥यो । उवा र आलु साँच्चिकै राम्रो फल्यो । प्रकृति माता हाँसेजस्तो लाग्यो । त्यो वर्ष दुईटा भेडाका ठूला पाठालाई हिमचितुवाले खाइदिएबाहेक अरू नोक्सान केही भएन । कर्मा मिहिनेति र इमान्दार हुनुका साथै बलियो थियो । हिउँ बाक्लो परेकाले त्यो वर्ष पनि यार्सागुम्बा राम्रोसँग टुसाएको थियो । दुवै जनाले खोजेको यार्सागुम्बा उनीहरू एक्लैले तिब्बतमा लगेर बेचे । त्यताबाट फर्कँदा कम्बल, दुध, चिनी, चामल, पिठो, साबुन, सोलार बत्ती, सबै लिएर आए ।
त्यो वर्ष राम्रै आम्दानी भयो । डोल्माको दुई बीस पुरानो रहर पूरा गर्न दुवैजना भएर काठमाडौँ र लुम्बिनीको तीर्थ गरे । डोल्माको सधँैभरि हिउँले खाएर बुढो सल्लाको बोक्राजस्तो देखिने अनुहार हिमाली पखेरामा फक्रेको गुलाबी रङको लालीगुराँसजस्तो चम्किलो भएर फक्रेको थियो । पखेराका काँडाले कोतरेर जिङ्ग्रिङ पर्ने उनको केश भेरी किनारमा लर्केको सालिमको खरजस्तै लरक्क लर्केको थियो । ‘‘आनन्द भयो भने त्यसको असर शरीरका नसा–नसामा पनि पर्दोरहेछ’’ गाउँलेले डोल्मालाई भन्न थालेका थिए ।
तीर्थबाट फर्केपछि घर र रोक्योको चोर्तेन सफा गरेर पूजा गरे । “आज काठमाडौँ र लुम्बिनीको प्रसाद खान साँझ घर आउनु है ।” गाउँका सबै छिमेकीलाई डोल्माले निम्ता गरिन् । त्यो रात अबेरसम्म छ्याङ पिउँदै रमाइलो गर्दै सबैले नाचगान गरे ।
घरको छानोमा रहेको सानो चोर्तेनमा गाडेको नयाँ झण्डा एकनासले फरफराइरहेको थियो । ती दुई जोडीको मुस्कान पूर्णिमाको मुस्कानजस्तै पूर्ण देखिएको थियो । त्यो मुस्कानले रोक्यो मात्र होइन साल्दाङ उपत्यका नै हँसिलो भएको थियो ।
जेठ १५, २०७७ , bishnu.nmdc@gmail.com